Mgbe mmetụta bụ nnọọ irè omume na ọbụna ọkọlọtọ ụdị nwere ike na-ịrịba ama mmetụta ndị na-eleghị anya, mgbe tụrụ nnọọ anya na ọbụna site Adobe, Otú ọ dị otu nke oké ihe banyere ngwaahịa na-mmụba nke nkwụnye ins nke nwere ike inyere machiini ụfọdụ n'ime ndị mmetụta ma ọ bụ ọbụna tinye kpamkpam ngwá ọrụ ọhụrụ gị ngwá.
N'iburu nke ahụ n'uche, ebe anyị ga-depụta si top 10 nkwụnye ins maka Mgbe Mmetụta na-abịa na ebube na-eri nke ihe ọ bụla, ee, ha niile na-kpamkpam free.
1. ObviousFX Copy-Image ikwunye na
Mbụ na m ndepụta dị nnọọ mfe ikwunye na, Otú ọ dị, ọ bụ ụdị a timesaver na ọ bụ maa a ikwunye na na kwesịrị na ihe ọ bụla ndepụta. Copy-Image agbakwụnye otu iwu ka edit menu, na iwu ịbụ 'Copy Image'.
Gịnị na iwu, na otu click, bụ iha aha na idetuo ugbu a mejupụtara n'oge họrọ ka clipboard, na-eme ka ị na-mado ya n'ime ihe ọ bụla ọzọ omume, dị ka Photoshop, na-enweghị mkpa na-aga site usoro nke na-azọpụta a etiti ihe oyiyi faịlụ na na na nke igbe Mgbe mmetụta na-achọ. Ọ bụghị a egwuregwu changer ọlị, ma nke ukwuu a oge nchekwa, kwesịrị ya.
2. Video Copilot atọrọ atọ - Ìhè sabers
Ọ dịghị ihe na ụwa dị mma karịa ìhè saber, na kechioma maka anyị Video Copilot nyere anyị na a free preset ike ha! Video Copilot n'ezie na-emepụta na 30 free presets ekpuchi a dịgasị iche iche nke ngwaọrụ, kama maka 2nd ntụpọ na anyị na ndepụta anyị dị ike iguzogide ìhè saber ngwá ọrụ. Ọ na-abịa a keukwu set nke nhọrọ na-enye gị ohere ịgbanwe agba, echiche, tinye ngagharị blur na ọbụna na-agụnye ikike simulate na saber firing na mechisịrị ọnụ ala. Dị nnọọ tinye nsonaazụ ụda!
3. Æ ire ọkụ
Nke a bụ ọmarịcha mmetụta na site na mara mma acha fractals na ike ga-animated. Na nhọrọ maka agba, osisi ike, njupụta na na ha bụkwa ndị ukwuu customizable ka i nwee ike inweta kpọmkwem mmetụta ị bụ mgbe. E nwere nnọọ ọtụtụ ojiji maka ndị a si intros n'ihu, ha na-eme-ele anya pụtara na ndị dị mfe iji. Ebe e nwere ọtụtụ ugwo maka plugins na nwere ike na-a mmetụta yiri, onye a bụ kpam kpam free.
4. Normality site 3DCG
Nke a bụ a ikwunye na ọkụ na shading gị footage, ma gịnị mere onye a guzo n'elu ndị ọzọ free ikwunye na utilities ọkụ bụ na ọ bụ nke ndị dị otú a elu àgwà, juru n'ọnụ na ọkachamara atụmatụ ike ụfọdụ pụtara mmetụta. Enyere ọkụ nke 3D akpọkwa si kpọmkwem n'ime eku, ihe na, ọ bụghị kwa ogologo oge gara aga, ngalaba nke dị oké ọnụ nchịkọta, ebe i nwere ike nwere na ọrụ na akara maka free.
5. Typominal - Digital nkumigwe Text Atọrọ
Ọ bụghị ihe ị ga-eji ụbọchị ọ bụla, o sina dị, ọ bụ oké obere preset ka nwere, na dị ka ọ bụ free, gịnị mere ọ bụghị ya? Typominal na-etinyere a ederede oyi akwa na-emepụta a kọmputa ọnụ anya maka ederede. Ọ nwere oke nke abụọ cursor na ụdị na-dị irè na ihe ọ na-eme. Chee echiche nke na idaha ná mmalite nke Ọbịa, ma eleghị anya ọbụna Wargames, e nwere ọtụtụ ebe dabara na ẹbọ ke, sayensị akụkọ ifo karịsịa. Ọ dịghị, ọ ga-abụ a Gaa preset na bụla oru ngo, kama maka nri oru ngo, ọ bụ a kediegwu mmetụta.
Onye a bụ Mac nanị, ma ọ bụ ndị dị otú ahụ a keukwu ngwugwu na ọ bụ n'ezie nwere na-gụnyere ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ikike n'elu ikpo okwu na-eji ya, e nwere a dum usu nhọrọ dị n'ime nke a otu mkpọ, na 44 iche iche nkwụnye ins gụnyere 10-arụsi ọrụ ike ederede mmetụta, niile kpamkpam free na-enweghị oge ókè, watermarks ma ọ bụ ihe ọ bụla. N'ihi na onye ọ bụla na-achọ a n'ozuzu ngwugwu nkwụnye ins ntọt ha nhọrọ, onye a bụ kasị maa ya. Ukwuu a ọkachamara ngwaahịa si a ọkachamara ụlọ ọrụ, n'ihi na free!
7. Instagram ikwunye na site Cineblur
A bụ ihe ọzọ dị mfe otu, ma bara ezigbo uru. Ọ na-enyere gị aka mimic Instagram nzacha na na-otú maara nke ọma, ọ bụghị banyere ewu ewu na-ọtụtụ nde. Ị nwere ike dakọtara na mobile footage na Intro ma eleghị anya, ma ọ bụ nanị chọrọ inye na anya gị footage, ihe ọ bụla kpatara ya, ọ na-eme ọrụ mfe na effectively.Another free ikwunye na nke na-adịghị nwere a dịgasị iche iche nke ojiji ma dị irè na-eme ihe e mere ya na-eme. Na ị chọrọ Instagram anya gị video? Nke a na-eme ya na otu Pịa. N'ihi na free.
8. Video Copilot Ntụgharị Uche ikwunye na
Ọzọ Video Copilot ikwunye na ebe a, ma nye àgwà nke ha free àjà ọ bụghị ihe ijuanya. N'adịghị ka ndị gara aga ìhè saber ikwunye na, onye a bụ a bit ọzọ mainstream na ya were. Ịmepụta reflections ọbụna na aka ike angles, mmetụta bụ, ka anyị na-atụ anya n'aka Video Copilot, nanị pụtara na mfe mejuputa. Dị ka mgbe, ha ọbụna na-emepụta a free video ndu-enyere gị aka na-grips ya na-esi ihe kasị mma nke ya ike.
Onye a na-eme kpọmkwem ihe ọ na-ada ka ọ na-eme, ọ na-emepụta Christmas osisi epupụta na alaka maka gị. Ha nwere ike animated, ha dị nnọọ ezi uche dị na ha bụ ndị zuru okè n'ihi na ọ bụla ezumike themed oru ngo. E nwekwara a enyi ikwunye na-akpọ ịchọ mma na ọ bụ nakwa free-ahapụ gị ike mara mma Christmas osisi decorations kpọgidere si gị ọhụrụ ghọtara osisi. Ma na ngwaahịa bụ ukwuu customizable na nnọọ irè. Ee, isiokwu okwu nwere ike iyi obere oké njọ, ma ndị a bụ elu àgwà ngwaahịa ike nke na nnọọ ezi uche mmepụta, a bit nke fun maka ememe na a oké njọ ngwá ọrụ nile na otu.
10. Magic mgbo Quick Anya Free
RedGiant-eme ka ụfọdụ Wezuga elu àgwà nkwụnye ins, na nke a free nhọrọ bụ ọ dịghị ma e wezụga. Ebe ọ kọrọ ọtụtụ ihe nke ugwo maka nkwụnye ins, na bụ ihe kwere nghọta, ma ihe ọ na-nwere bụ 20 presets maka na agba mmetụta ka simulate anya nke dị iche iche mma na fim, gụnyere matriks na Azọpụta Private Ryan. Ndị a na-enweghị ẹsịn ọnụ freebies ma, ndị a bụ sample presets na na-gụnyere n'ime aghọtakwuola nso nke ugwo maka ngwaahịa, n'ihi ya a n'ụzọ zuru ezu-fledged professionally emepụta ngwaahịa maka free. Ọ nwere ike ghara inwe mma karịa nke ahụ.
E nwere nnọọ ọtụtụ nhọrọ maka nkwụnye ins maka Mgbe mmetụta na ị pụrụ n'ezie ịhụ a ngwá ọrụ ime mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla, eleghị anya isi ihe anyị na-ada anyị nnyocha n'ime a top 10 ndepụta bụ na ọtụtụ mgbe, ndị a free na ngwaahịa ndị dị ka eru na professionally-emepụta dị ka ọ bụla ugwo maka ikwunye na si n'ebe. Ego ha n'iru okodu gị ego.
> Resource> Free> Top 10 Best Free Mgbe mmetụta Plugins maka Video edezi